Cat & mouse waa 5 ambadeen, 9 midho payline ciyaar mashiinka laga heli karaa mFortune Casino. Ciyaarta ayaa waxaa ka mid ah calaamadaha madadaalo sida mouse a cawl, bisad brown, bisad iyo mouse calaamad boorso lacag ah, mousetrap ah iyo qaar ka mid ah farmaajo, iyo sidoo kale kaararka ciyaareed qiimaha sare. Sidoo kale waxaa jira afar tamashle abaalmarinta oo ku lug bisad ceyrsaneysa mouse iyo taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku guuleysato lacag caddaan ah oo dheeri ah. Intaa waxaa dheer, ciyaarta waxaa ka mid ah calaamadaha duurjoogta, calaamadaha kala firdhiso, laablaabi, dhigeeysa xor ah oo Ghanna a.
Play Cat & Mouse ee Our Casino talinayo
Sida loo Play Game ah
Sida Cat & Mouse waa ciyaar midho mashiin, waa ciyaar fudud si ay u bartaan sida loo ciyaaro. Waxaad u ciyaari kartaa xiiso leh si aad u hesho dareenka ee ciyaarta ama ciyaaro lacag dhab ah si ay u bilaabaan guuleystay in wax waqti ah. Si aad u bilaabaan ciyaar aad u dhigi karto bet a kaas oo noqon kara heerka ugu hooseeya ee 10p.
mouse waa Calaamooyinka duurjoogta ah oo ku Baddasha wixii calaamado kale, marka laga reebo calaamad kala firdhiso ama calaamad ciyaarta gunno ah si ay u dhamaystiraan isku-dar ah ku guuleystay.
cat waa calaamad ku kala firdhi ah. Haddii aad miiqdaan saddex ama in ka badan calaamadaha kala firdhiso on line mid aad waxaa lagu Abaal marin dhigeeysa free.
bacda cat iyo mouse Lacagta waa calaamad Ghanna iyo haddii aad miiqdaan shan ka mid ah on payline firfircoon, aad waxaa lagu Abaal marin Ghanna oo dhan.
Haddii aad miiqdaan laba ama in ka badan godad mouse on payline firfircoon, aad geli doona kulanka gunno ah. Waxaad waa la qaadi doonaa guddiga ciyaaraha la mouse a iyo bisad. Waxaad u baahan doontaa in uu hirgaliyo laadhuu ee isku day ah in ay sii hor mouse of cat ah. Waxaad ku guuleysan doonaa sidii god oo aad dhul on iyo dhererka waqtiga aad maamuli in ay sii mouse ka hor bisada. Waxaad ku guuleysan karto lamoodaa weyn ee kulankaan.
Free Play Mobile boosaska | £ 5 Slot Maalmihii